musha 9 Products 9 MotioCI
Rerutsa maCognos kusimudzira, kutumirwa, vhezheni kutonga / shanduko manejimendi, kushuma, uye otomatiki BI kuyedzwa.
MotioCI inopa vanyori veCognos nevatungamiriri vane hunyanzvi hunyowani hunosanganisira: kukurumidza kukwidziridzwa, shanduko manejimendi & kudzora vhezheni, kuendesa nekukurumidza, otomatiki kuyedza, uye nekuvandudza kuchenesa.
Bvisa Marwadzo kubva Kuvandudza Cognos Analytics
Cognos Analytics inova zvirinani nekusunungurwa kwega kwega, asi pasina MotioCI, kukwidziridzwa kunogona kutora mavhiki ekugadzirira uye kuyedza. Isu tinorerutsa yako Cognos kusimudzira kuti iwe ugone kunakirwa nezvakanaka pasina kunetseka uye kurasikirwa kwenguva.
Uchishandisa yedu Inventory, Shanduro Kudzora, Kuzviongorora Kwayedza uye Misa Kugadziridza kugona, timu yako inogona:
Z Ziva uye chengetedza zvakachengeteka iyo cruft
ZGadzira uye gadzirisa kuyedza uye kusimbisa
ZDzivisa kugadzirwa kwechando
Chengetedza Zvakachengeteka Iyo Cruft kubva kune Yako Cognos Nharaunda
Yako Cognos nharaunda inowanzo kuve yakasvibiswa nezvinhu zvisingadiwe kana zvisingawanikwe nekufamba kwenguva sevashandisi vanogadzira zvemukati. Iyi cruft inotungamira kumatambudziko akaita se:
ZYakawedzeredzwa Kwidziridzo macircuit
ZNguva yakarasika pazvinhu zvisina basa
ZVashandisi Vakavhiringidzika uye Vakagumbuka
ZZvakaipa Bhizinesi Sarudzo
ZInononoka kutanga nguva
Chikwata chako chinogona kukurumidza uye nyore - kuziva uye nekuchengetedza zvinhu zvakapwanyika, zvisina basa, kana zvakapetwa - ongorora magadzirirwo anomalies uye maitiro akanakisa - ongorora zvingaite nyaya dzekuita.
Deredza Kunetseka kweCognos Kuedzwa
Kuedzwa uye Kugadziriswa kwemaitiro anogara aripo mune chero analytics kuitiswa; kana yaitwa nemaoko maitiro aya anodya yakawanda nguva uye haawanzo kutungamira kune zvemhando mhedzisiro. Nekuzvimisikidza zvese zviri zviviri, isu tinobvisa inodhura, inokanganisa, uye inonetsa manyore kukanganisa kukanganisa kutenderera kubva kuchikwata chako, zvichivagonesa kutarisa mukugadzira nyowani analytics kumhanya uye kukura bhizinesi.
Otomatiki BI kuyedzwa kunoderedza:
ZKutenderera uye Kuendesa Nguva
Kuzviongorora kuyedza kunoita kuti timu yako iwedzere zvinoshanda, zvakarurama, uye chivimbo pakukurukura kwako.
Bvisa iyo Hassle kubva kuCognos Deployments
Deredza nguva, simba, njodzi, uye huwandu hwevanhu vanobatanidzwa nekutakura kwako. MotioCI inokutendera iwe kubatanidza akawanda nharaunda uye zvakachengeteka kusimudzira zvakanangwa zvirimo pakati pavo. Kubvisa kudiwa kwe server kuwana yekufambisa mafaera kunopa timu yako nekwanisi yekukanda-imwechete deployments.
Bhizinesi rako harimbomira, nekudaro, kana ako analytics. Iwe unofanirwa kuve nekutonga uye kugona kuongorora kweakanakisa maitiro, kunyanya kune ako ekuzvishandira-mashandisiro kesi. Maturusi edu anokutendera kuti utarise zvese zvinoitwa neshanduko uye nekuchengetedza nharaunda ine hutano uye ine hutano.
ZTarisa-mukati / Tarisa-Kubuda
MotioCI inogonesa IBM mabhizimusi zvikwata manejimendi yavo zvemukati deployments ivo vachipa hutongi Nekugadzira akawanda emawoko manejimendi manejimendi uye nerutsigiro mabasa, IBM yakakwanisa kudzikisa aya madhora zvakanyanya ne MotioCI.IBM Leverages Motio Kuchengeta Mari…
Yakaderedzwa nguva yakashandiswa mukusimudzira uye kusunungurwa mukugadzirwa. Inogoneswa hutongi uye kutonga apo uchipa kuzvitonga uye kuzvishandira. Inotenderwa kutonga pamusoro pehunhu hwe data uye kuongorora mashandiro Kuvandudza ruzivo rwevashandisi vebhizinesi nezvikanganiso zvishoma zvichipfuudzwa ku…
Nekupa kuoneka mu "ndiani ari kuchinja chii," MotioCI yakagonesa Ameripath kuti ikurumidze kuona mhedzisiro yezvakakonzera uye yakatungamira kukurumidza kukudzwa nekugadziriswa kwenyaya, ichiwedzera zvese zvibereko nehunhu.
Nekukosha kwekuchengeta dhata remurwere rakachengeteka, dhizaini yekuchengetedza yaDaVita ndiyo inonyanya kukoshesa. MotioCI inoshandisa chengetedzo uye kumisikidza marongero pakati penharaunda. Izvi zvinobvisa pamawoko kugadzirisazve zvigadziriso zvekumisikidza, izvo zvaizosiya…
ne MotioCI, Providence St. Joseph Hutano akazadzikisa kudzikamisa uye kudzora zvinodikanwa pamusoro pekuvandudza mushumo. Izvi zvakavandudza mashandiro avo uye kuenderana mukuwana dhata chaiyo mumaoko evashandisi vayo.Eliminated mishumo yakaputsika, yakaipa data,…
Iyo Yunivhesiti yeColorado yaive neyakaomarara BI ecosystem iyo yakasangana nezvakawanda shanduko kune nharaunda, uye yakashaikwa kuoneka uye otomatiki mukuendesa kwayo uye nzira dzekuyedza. CU yaishandisa makumi ezviuru zvemadhora, pachiitiko, kutsvaga nekugadzirisa…
Texas Tech University yakaziva kukosha kwekudzora vhezheni munzvimbo yavo yeBI pakaitika chiitiko chisina kunaka- mishumo yakabviswa uye nzira chete yekuvadzorera yaive yekudzosera yavo yese yezvitoro. Nehurombo kudzorerwa kwechitoro ichi chemukati…
Kufarira kuva Motio Ko Cognos yako inokusimudzira iwe here? Dzvanya pano kudzidza zvakawanda.